5G အကြောင်း သိကောင်းစရာများ – DigitalTimes
FEATURES Mobile & Tablets Smartwatches TV & Smart Home Device
5G ဆိုတာ ဘာလဲ ?
5G ကွန်ယက်ဟာ နောက်မျိုးဆက် မိုဘိုင်း အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု ဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းနဲ့ အခြား ကိရိယာများမှာ အရင်ကထက် ပိုမို မြန်ဆန်၊ တည်ငြိမ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် အင်တာနက် ကွန်ယက် နည်းပညာနဲ့ သုတေသနများကို ပေါင်းစည်းထားတဲ့အတွက် 5G ဟာ လက်ရှိ ဆက်သွယ်မှုများထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုု လျှင်မြန်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပျမ်းမျှ ဒေါင်းလုပ် အမြန်နှုန်းဟာ 1GBps ဝန်းကျင် ဖြစ်မယ်လို့ တွက်ဆထားကြပါတယ်။
5G ဟာ Internet of Things နည်းပညာကိုလည်း အရှိန်မြှင့်တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေတာ ပမာဏများစွာကို သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦးကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ သူ့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက် ပိုမို ချိတ်ဆက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5G ကို ဖန်တီးနေကြဆဲ ဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာအဝန်းမှာ သူ့ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ တွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိ 3G , 4G နည်းပညာများနဲ့လည်း အတူတကွ အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး သင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5G ကို သုံးနိုင်မယ့် အချိန်
5G နည်းပညာကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာအဝန်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာ 5G ကွန်ယက်ကို အစောဆုံး တပ်ဆင်နိုင်မယ့် နိုင်ငံများထဲမှာ ပါဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံများရဲ့ တည်နေရာအချို့မှာ 5G ကို ၂၀၁၉ ထဲမှာ သုံးနိုင်မှာပါ။ ဗြိတိန် အပါအဝင် အချို့နိုင်ငံများဟာ သူတို့နောက် သိပ်မကျန်ဘဲ အမှီလိုက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများစွာဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အမှီမှာ 5G အဆင်သင့် ဖြစ်စေဖို့ သူတို့ရဲ့ ကွန်ယက်နဲ့ ကိရိယာများကို စစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ထင်ထားတဲ့ အချိန်ထက်စောစွာ 5G ကို အသုံးပြုနိုင်ကောင်း ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5G ကွန်ယက်ရဲ့ အားသာချက်များ
•	Download , Upload Speed များဟာ ပိုမို လျှင်မြန်လာခြင်း။
•	အွန်လိုင်းမှ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရာမှာ မထစ်ခြင်း။
•	အရည်အသွေး မြင့်မားတဲ့ အသံနဲ့ ဗီဒီယို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
•	ပိုမို တည်ငြိမ်တဲ့ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု ရရှိခြင်း။
•	အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ IoT Devices များ ပိုမိုများပြားလာခြင်း။
•	မောင်းသူမဲ့ ကားနဲ့ စမတ် မြို့တော်များ အပါအဝင် အဆင့်မြင့် နည်းပညာအသစ်များကို တိုုးချဲ့နိုင်ခြင်း။
5G ဟာ ဘယ်လောက် မြန်သလဲ ?
5G ကို ဖန်တီးနေကြဆဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူဟာ 4G ထက် ဘယ်လောက် လျှင်မြန်မလဲ ဆိုတာ အတိအကျပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ သူဟာ လက်ရှိ ကွန်ယက်ထက် Download , Upload Speed မှာ သိသိသာသာ လျှင်မြန်လာမှာ သေချာပါတယ်။ GSMA က သူ့ရဲ့ အနည်းဆုံး ဒေါင်းလုပ်နှုန်းဟာ 1GBps ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ပညာရှင်များရဲ့ အသေးစိတ် တွက်ချက်မှုများ အရ 5G ကွန်ယက်ရဲ့ ပျမ်းမျှ အမြန်နှုန်းဟာ 10Gb/s နဲ့ အချို့ကလည်း ဒေတာ ကူးပြောင်းမှုနှုန်းဟာ 800Gb/s အထိ ရှိမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအမြန်နှုန်းနဲ့ ဆိုရင် HD Movie တစ်ခုကို တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Software Upgrades များ ပြုလုပ်ရာမှာလည်း ဒီနေ့ခေတ်ကထက် အလွန် လျှင်မြန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် ဖုန်းမှာ 5G ကွန်ယက်ကို ဘယ်အချိန် သုံးနိုင်မလဲ ?
လက်ရှိ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များကတော့ 5G ကွန်ယက်ကို သုံးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 5G ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချီမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ အချိန် မတိုင်ခင်မှာ 5G Device များ ပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း 5G Phone တွေကို ကြေညာနေကြပါပြီ။
ဒါပေမယ့် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။ 5G ပေါ်လာတာနဲ့ 3G , 4G ကွန်ယက်များဟာ ချက်ချင်း ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် သင့်ရဲ့ ဖုန်းအဟောင်းဟာ 5G ပေါ်လာရင်တောင် 3G, 4G တို့ကို ဆက်သုံးနိုင်မှာပါ။
5G ကွန်ယက်ဟာ လက်ရှိ ကွန်ယက်များနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆက်သွယ်မှုကို ပိုမို တိုးတက်စေမှာပါ။ ကွန်ယက် အဟောင်းများဟာ 5G မမိတဲ့ နေရာများမှာ Back-Up စနစ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ။ 5G မပေါ်ခင်မှာ 4G ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ 4.5G ( LTE-A) ဟာလည်း ပေါ်ထွက်လာဦးမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ တောင်ကိုရီးယားမှာ 4.5G ကို သုံးနေပါပြီ။
5G ကို ချက်ချင်း ပြောင်းလဲလို့ မရပါဘူူး။ နည်းပညာအသစ်အတွက် 4G ကွန်ယက်များကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆင့်မြှင့်ခြင်း၊ အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို လဲလှယ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။